> Resource> Draịvụ> Olee naghachi Data si Raw Draịvụ
Enwere m ike Naghachi Data si Raw mpụga ike mbanye?
Ezigbo nchịkọta akụkọ, taa, mgbe m nwara emeghe m mpụga ike mbanye, apụghị m nweta ya. M nwetara a ozi kwuru na "The disk na mbanye H: na-adịghị Ị. Ị chọrọ usoro ya ugbu a? "Ihe bụ nsogbu bụ na apụghị m usoro ya. M nwere nza nke dị mkpa faịlụ na ya. M maara m mpụga ike mbanye bụ a raw mbanye ugbu a. Dị ụzọ ọ bụla na m nwere ike weghachite data si raw ike mbanye? Ekele.
Raw ike mbanye na-emekarị pụtara na ọ dịghị faịlụ usoro na na draịvụ ike. A na-eme na-akasị n'ihi usoro njehie, na-ezighị ezi na ime ihe ma ọ bụ nje agha. Formatting ọ pụrụ emekarị dozie nsogbu. Ma ike mbanye formatting nwere ike iri niile data na na draịvụ ike anya. Nke a bụ ihe mere gị mkpa a Raw ike mbanye data mgbake omume, nke ga-eme ka azụ niile data gị Raw disk.
Wondershare Data Recovery, Ma ọ bụ Wondershare Data Recovery for Mac bụ ihe kasị mma nhọrọ maka gị na-agbake data si Raw ike mbanye. Ọ na-enyere gị iji weghachite ọtụtụ ụdị faịlụ gị Raw ike mbanye, gụnyere foto, ọdịyo faịlụ, videos, akwụkwọ na ndị ọzọ. Na ya ọrụ na onye-Enyi na Enyi interface na mma-mgbake ụzọ, ị dị nnọọ mkpa jikọọ Raw ike mbanye gị na kọmputa na ẹkedori omume na-ike iṅomi ya.
Ị nwere ike nweta a ikpe mbipute a omume iji weghachite data si Raw ike mbanye ugbu a.
Igosi Raw Draịvụ Data Recovery na 3 Nzọụkwụ
Ugbu a, ka hazie mgbake na Wondershare Data Recovery maka Windows kọmputa. Mac ọrụ biko na-Mac version nke usoro ihe omume.
Nzọụkwụ 1 Họrọ mgbake mode naghachi data si Raw ike mbanye
Atọ mgbake ụdịdị ga-nyere maka gị mgbe na-agba ọsọ usoro ihe omume na kọmputa gị, dị nnọọ ka ị pụrụ ịhụ site oyiyi n'okpuru.
Ebe a, iji weghachite data si Raw ike mbanye, ka na-"Raw File Iweghachite" dị ka a na-agbalị.
Nzọụkwụ 2 iṅomi gị Raw ike mbanye ịchọ faịlụ na ya
Na nke a nzọụkwụ, ị dị nnọọ mkpa họrọ gị Raw ike mbanye na pịa "Malite" na-amalite ịgụ isiokwu ya.
Nzọụkwụ 3 Naghachi data si Raw ike mbanye
Mgbe iṅomi dị n'elu, niile recoverable faịlụ gị Raw ike mbanye ga-egosipụta na omume window.
Ị dị nnọọ mkpa họrọ ha na pịa "Naghachi" na-azọpụta ha na kọmputa gị.
Cheta na: Ebe ọ bụ na "Raw mgbake" mode adịghị egosi na mbụ faịlụ aha na ụzọ, ọ bụ na ị na-azụta zuru version naghachi hụrụ faịlụ ma ọ bụ.